Twin Seoul ayaa martigelin wareega lixaad sida "Dadkuna" waa
トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Twin Seoul ayaa martigelin wareega lixaad sida "Dadkuna" waa
Wajahay soociddiisa wareega afraad ee wax dhabta ah [3500 yen qiimaynta Free] in psychics ee jidka
naf mataanaha ee marxaladda hesho, mar taag naftayda at ee u dhexeeya marxaladda shanaad aad tahay meel fog, Waxay ahayd mudada ay ujeedadiisu tahay in baraaruga ruuxi ah si kor loogu qaado iyaga u gaar ah. Muddada ku cafiyo dadka oo dhan ku wareegsan ma aha oo kaliya soo horjeeda ku, by jacaylka aan shuruud lahayn shubtay, dhici doonaa resonance nafta.
nidaamka, waxa ay awoodaan in ay sii wadi marxaladda lixaad, oo waa heerka ku xiga uu noqon doono. At this stage, gebi ahaanba ka tagis ego in la qabtay ilaa iyo haatan, aan istaagi karin marxaladda sare sida qof.
ma naftaada, ka fikir waxa laga qaban karo qof aan weydiisanaya soo laabtay, iyo Aqbal muuqaalka runta ah, jidhka iyo maskaxda ku iman tabar buuxda galaya baraaruga ruuxi ah waxaad arki doontaa. Haddii ay suuragal tahay in la sii wado
in marxaladan, dhammeeyey waqtiga kala, kuwaas oo u adkaystay dheer, waxaad sii wadi kartaa in heerka ugu dambeeya.
marxaladan in jacaylka
? shuruud la'aan marka ay si buuxda u soo dhaweyn baraaruga ee ku shubay oo dhan ee dadka, tuur ego la beerayaa ka waayo-aragnimo iyo aqoon ee la soo dhaafay oo dhan, nafta waa ruuxa soo jeedo waxaan sii wadi doonaa in hab. Markaas, ma aha mar dambe suurto gal ah in aad ka fikirto waxyaabaha ku jira faa'iido iyo khasaaro, waxa uu noqonayaa mid si ku shub jacaylka aan shuruud lahayn si ay dadka oo dhan.
jirto, waxaa jira ego jirin, sida ay tahay in ay si fiican u maleynayaa in dadka nafta oo mataano ah oo daarmayaay'e. Maxaa yeelay, dhammaan dhacdooyinka ka dhaca iyaga u gaar ah, aqbalay iyo waxa ay noqotay sida ugu badan ee suurtogalka ah, iyo Dambi Dhaaf, iyo waxaad heli kartaa jacaylka.
Tani waa, Waxaan fahamsanahay in Ilaah waa dhacdo in keeneen waxay keeni doontaa in ay aqbalaan wax walba.
? walba aqbalaan dhexdhexaad
aqbalaa wax walba, oo sidaas waa laga tegi oo kaliya in nooca keenay by Ilaah, in ay ku riday on iyaga u gaar ah Ma aha wax xanaaqsan Rusubete, waa la aqbali doonaa in dhex-dhexaad ah. Waa xanuun soo baxsaday ilaa iyo haatan, wejigiisii ??derbiga ku sii xitaa aan fogow, waxaad ma aha mar dambe ka cabsadeen inay naftaada ha dareen Ilaah iyo caalamka oo dhan.
Taasi waa sababta, jacaylka aan shuruud lahayn ma in ay raadsadaan laabashada awoodaan in ay ku dhawaad ??toogan noqon doonaa. Waxay jecel yihiin inay noqon dhex-dhexaad ka noqoto, daacad wax doonaa, haddii aad halkaas naftaada kor u qaadi kartaa, waxaad yeelan doontaa in ay keeni resonance ee nafta mataanaha aad ugu dhaqsaha badan ka maqan tahay. Marka
la sii daayay ka ego u yimaadeen inay
marxaladan si ay u noqdaan hawl yar, way adag ahayd ilaa hadda baaba'aan, waxaad dareemi doontaa sida a mabsuud la sii daayay ka ego. Markaas, aad ka ogaan doonto inuu baaba'aan jiitaa on ilaa hadda waxaa si raaxo leh u barteen. Tani waa baraaruga ruuxiga ah ee dareenka dhabta ah ee erayga.
kor loogu qaado iyaga u gaar ah, haddii ay macquul tahay in siiyo in ay ka war ku xeeran jacaylka aan shuruud lahayn, kulan ka mid ah nafta ee mataanaha ah waxaa sugaya isla markiiba in halkaas.